महोत्तरीमा लागुऔषध कारोबारीसँग प्रहरीको भीडन्त, एकको मृत्यु - Jhilko
महोत्तरीमा लागुऔषध कारोबारीसँग प्रहरीको भीडन्त, एकको मृत्यु
महोत्तरी, १२ जेठ । महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिका –७ सहसौलामा गए राति लागुऔषध कारोबारीसँग प्रहरीको भीडन्त हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।
मृत्यु हुनेमा रामगोपालपुर –७ निवासी सुरेन्द्र यादवका छोरा १६ वर्षीय राजन रहेको प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । प्रहरी लागुऔषध कारोबारी भनिएका सोही ठाउँ बस्ने ५० वर्षीय सुरेन्द्र र २७ वर्षीय राहुल यादवलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ।
जारी लकडाउनका बेला पनि ठूलो मात्रामा लागुऔषध कारोबार गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिगएका सादा पोशाकका प्रहरी र लागुऔषध कारोबारीबीच रामगोपालपुर ७ स्थित सडकमा राति करीब ८ बजेतिर भीडन्त भएको थियो। चारैतिरबाट घेरा हाली लागुऔषध कारोबारीले आक्रमण गर्न खोजेको र प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा अभियुक्त राजनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
उनीमाथि ६ राउण्ड गोली लागेको थियो। सोही स्थानबाट अभियुक्त सुरेन्द्र र राहुललाई पक्राउ गर्नसमेत सफल भएको प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले बताए। घटनास्थलबाट केही मात्रामा लागुऔषध नाइट्रोभेट पनि बरामद गरिएको छ। सो भीडन्तमा प्रहरी हवल्दार सञ्जीव पासवान तथा प्रहरी जवान रामविहारी पासवान, मनोज साह र लालबाबु यादव गम्भीर घाइते भएको र उनीहरुको उपचार जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा भइरहेको जनाइएको छ।
भक्तपुरमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार
सोमबार एकैदिन थप ७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
अध्ययनले भन्छ इलेक्ट्रिक सिगरेट खतनाक !
ई–चुरोटले खासगरी मस्तिष्कको स्नायू प्रणाली र तन्तुमा ठूलो क्षति पुग्छ ।
हिमपहिरोका कारण मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध
चुमुनुब्री गाउँपालिका वडाअध्यक्ष पेमा डुण्डुप लामाका अनुसार नामरुङ गाउँभन्दा करिब...
रुकुममा पनि दुई जनामा पोजिटिभ !
कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमित फेला नपरेकोमा परीक्षण गर्दा रुकुममा...
लोकगीतमा यस्तो पनि नाच हुन्छ ? ज्योती भन्दा सरस्वती कडा...
छोटा लुगा र नेपाली महिला कलाकार आजकल पर्यायवाची जस्तै बन्दै गएको छ । सिनेमामा काम...